Kulanwaynihii Oo Galay Maalintii 4aad. - Cakaara News
Kulanwaynihii Oo Galay Maalintii 4aad.
Jigjiga,(CakaaraNews) talaado, 23ka, February, 2016, waxaa maalintii Afraad ka socda madasha shirarka ee xarunta madaxtooyada DDSI kulan waynihii wada tashiga shacabwaynaha DDSI iyo xukuumada DDSI.
Waxaana maanta ergooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada loo soo jeediyay warbixinta waxqabadka xukuumada DDSI ee sideedii sano ee ugu danbeeyay, 2000TTI ilaa 2008TI gaar ahaan wixii laga qabtay dhinacyada arimaha bulshada, nabadgalyada, maamulka suuban, horumarka aas aasiga ah, kaabayaasha dhaqaalaha iyo xidhiidhka dadwaynaha.
Warbixintan oo ahayd mid aad u dheer oo dhinacya badan ka warbixinaysa ayaa waxaa soo jeedinayay masuuliyiin heer deegaan ah oo ay ka mid yihiin wasiir ku xigeenka xafiiska madaxtooyada DDSI mudane Deeq Cabdilaahi Buraale, wasiir ku xigeen horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshada DDSI mudane Axmed Shugri iyo la taliyaha madaxwaynaha DDSI ee dhinaca diyaarinta iyo dabagalka warbixinada mudane Anwar Cali
Warbixintan oo ahayd mid ahmiyad balaadhan ku fadhiday aadna u soo jiidatay dareenka ergooyinka kulanwaynaha ayaa waxay inta badan isbar-bardhig ku samaynaysay heerka ay taagnaayeen adeegyada aas aasiga ah ee horumarinta wixii ka horeeyay 8da sano iyo hadda heerka ay gaadhsiisan yihiin gaar ahaan guulaha waawayn ee laga soo hooyay dhinacyada:- caafimaadka, biyaha beeraha, xoolaha waxbarashada, jidadka, horumarina magaalooyinka, dib u dajinta, abuuritaanka ilaha shaqada, xoojinta cududa shaqaalaha dawlada, abuuritaanka ilaha shaqada haweenka, isgaadhsiinta ,xaalada waxka qabadka abaaraha ay keentay cimilada isbadashay ee saamaysay bulshada ku dhaqan gobolka Siti iyo xidhiidhka arimaha qurba joogta DDSI.
Kulan waynaha ayaa wali halkiisa ka soo socda iyada oo la filayo in ay qaybaha kala duwan ee bulshadu fikirkooda ka dhiiban doonaan warbixintan.